ရှေးကောကျပှဲကာလ သတငျးယူရာတှငျ လိုကျနာရမညျ့ ကငျြ့ဝတျမြား – Voice of Myanmar
ရှေးကောကျပှဲကာလ သတငျးယူရာတှငျ လိုကျနာရမညျ့ ကငျြ့ဝတျမြား
( နိုဝငျဘာ ၈ရကျနမှေ့ာကငျြးပတော့မယျ့ ရှေးကောကျပှဲအတှကျ သတငျးဌာနအသီးသီးဟာ ပွငျဆငျမှုမြိုးစုံလုပျနကွေပွီဖွဈတာမို့ အယျဒီတာတှေ၊သတငျးထောကျတှအေတှကျ သိသငျ့သိထိုကျတာတှကေို ဘီဘီစီမွနျမာပိုငျးရဲ့ အငွိမျးစားဌာနမှူးဖွဈတဲ့ ဒျေါတငျထားဆှကေ သူ့ရဲ့အတှအေ့ကွုံတှကေို ဝမြှေထားတာဖွဈပါတယျ)
အယျဒီတာ ( VOM)
ရှေးကောကျပှဲကာလ သတငျးထောကျတှလေိုကျနာရမယျ့ ကငျြ့ဝတျတှကေို သကျဆိုငျရာ သတငျးဌာနတှကေ ရှေးကောကျပှဲ မတိုငျမီမှာ ထုတျပွနျလရှေိ့ပါတယျ။ ဥပမာ ဘီဘီစီက အယျဒီတိုးရီးယား ဂိုကျလိုငျးမှာ ရှေးကောကျပှဲ သတငျးယူတာနဲ့ ပတျသကျပွီး ဆောငျရနျ ရှောငျရနျတှေ ဖျောပွထားပမေယျ့လညျး ရှေးကောကျပှဲနီးလာတဲ့အခါမှာ သတငျးထောကျတှလေိုကျနာရမယျ့ ကငျြ့ဝတျစညျးမြဥျးအသေးစိတျကို ထုတျပွနျပေးပါတယျ။ ‌
ရှေးကောကျပှဲလုပျတဲ့အခြိနျမှာ နိုငျငံရေးအခွအေနကေ အရငျလိုမဟုတျပဲ ပွောငျးသှားနိုငျတာကွောငျ့ သတငျးထောကျတှေ လိုကျနာရမယျ့ ဂိုကျလိုငျးတှေ ကို ပွနျလညျသုံးသပျပွီး လိုအပျတာတှကေို ဖွညျ့စှကျဖျောပွပေးပါတယျ။
သတငျးတိုကျအသီးသီးက ရှေးကောကျပှဲကာလ သတငျးယူတဲ့အခါမှာ လိုကျနာရမယျ့ ကငျြ့ဝတျတှေ ထုတျပွနျထားလရှေိ့တာမို့ ကြှနျမအခု စုစညျးဖျောပွထားတဲ့ ကငျြ့ဝတျတှကေ အယျဒီတာတှနေဲ့ သတငျးထောကျတှေ ယဘေုယြ လိုကျနာရမယျ့ကငျြ့ဝတျတှဖွေဈပါတယျ။
မီဒီယာတှေ ဘကျလိုကျမှု ရှိမရှိ အစမျးသပျ အခံရဆုံးအခြိနျက ရှေးကောကျပှဲကာလလို့ပွောရငျ မှားမယျမထငျပါဘူး။ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ သတငျးတှတေငျပွတဲ့ အခါမှာ သတငျးထောကျတှေ အနေ နဲ့ မမှိတျမသုံလိုကျနာရမယျ့ အခကျြနှဈခကျြရှိပါတယျ။ အဲဒါကတော့ နိုငျငံရေး သတငျးတှကေို တငျပွတဲ့အခါမှာ တိကမြှနျကနျမှု နဲ့ ဘကျလိုကျမှုမရှိပဲ သမာသမတျရှိရှိ တငျပွဖို့ဖွဈပါတယျ။
သတငျးဦးဖို့ထကျ တိကမြှနျကနျမှုရှိဖို့က ပို အရေးကွီးပါတယျ။
တိကမြှနျကနျမှု ဆိုတာ အခကျြအလကျတှမှေနျကနျတာတဈခုတညျးကိုမဆိုလိုပါဘူး။ အခကျြအလကျမှနျဖို့ လိုသလို သတငျးနဲ့ ဆကျစပျနတေဲ့ ဆီလြျောတဲ့ သဘောထားအမွငျတှကေိုပါထညျ့သှငျးစဥျးစားဖို့လိုပါတယျ။ တိကမြှနျကနျတဲ့ သတငျးဟုတျမဟုတျကို စိစဈတဲ့အခါမှာ အောကျဖျောပွပါအခကျြတှကေို ထညျ့သှငျး စဥျးစား ဖို့လိုပါတယျ။
 ရရှိတဲ့သတငျးအခကျြအလကျက သတငျးဖွဈတဲ့နရောမှာ ရောကျနတေဲ့ သတငျးထောကျ သို့မဟုတျ မကျြမွငျသကျသဆေီကသတငျးလား ?
 သတငျးအရငျးအမွဈ တဈခုတညျးကို ကိုးကားဖျောပွတာမြိုးကို အတတျနိုငျဆုံးရှောငျရနျ (တကယျလို့ သတငျးအရငျးအမွဈတဈခုတညျးကို ကိုကားမယျဆိုရငျ ယုံကွညျစိတျခရြတဲ့ သတငျးအရငျးဖွဈဖို့လိုသလို သတငျးအရငျးအမွဈကို လိုအပျရငျ အမညျနဲ့တကှ ဖျောပွနိုငျဖို့လိုပါတယျ)
 ရရှိတဲ့အခကျြအလကျတှနေဲ့ ကိနျးဂဏနျး စာရငျးဇယားတှကေိုစိစဈပါမယျ။ စိစဈတဲ့အခါမှာ သတိပွုရမယျ့အခကျြတှပေါရငျ မှတျသားထားဖို့လိုပါတယျ။
 စာရှကျစာတမျးအထောကျအထားတှေ နဲ့ ဒဈဂဈြတယျ အထောကျအထားတှေ ရရှိရငျ ခိုငျလုံမှုရှိမရှိစိစဈရနျ
 ပါဝငျပတျသကျသူတှရေဲ့ပွောဆိုစှပျစှဲခကျြတှကေ ခိုငျမာမှုရှိမရှိစဈဆေးရနျ တို့ဖွဈပါတယျ။
နိုငျငံရေးပါတီတှနေဲ့ အငျတာဗြူးတှကေ မဲဆန်ဒရှငျတှေ နဲ့ ပါတီတှကေို မိတျဆကျပေးတာဖွဈတဲ့အတှကျ ရှေးကောကျပှဲကာလမှာ လိုအပျတဲ့ အစီအစဥျတဈခုဖွဈပါတယျ။
• နိငျငံရေးနဲ့သကျဆိုငျတဲ့အငျတာဗြူးတှလေုပျဖို့ နိုငျငံရေးပါတီ သို့မဟုတျ ရှေးကောကျပှဲဝငျမယျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို အငျတာဗြူးတောငျးတဲ့ အခါမှာ ကိုယျတောငျးတဲ့အငျတာဗြူးကို ဘယျအစီအစဥျကနေ တငျဆကျမယျဆိုတာရယျ၊ ဘယျလိုအကွောငျးအရာနဲ့ ဆကျစပျပွီး တငျပွမယျဆိုတာရယျကို အငျတာဗြူးပေးတဲ့ သူသိအောငျလို့ ရှငျးပွဖို့တာဝနျရှိပါတယျ။ မပွောပဲလှငျ့လိုကျပွီးမှ ကနျ့ကှကျတာမြိုးတှမေဖွဈအောငျလို့ ကွိုတငျအသိပေးဖို့လိုပါတယျ။
• အငျတာဗြူးလုပျတဲ့အခါမှာ မေးသငျ့မေးထိုကျတဲ့မေးခှနျးတှကေို မေးရပါမယျ။ မေးသငျ့တဲ့မေးခှနျးတှကေို မမေးပဲ ခနျြလှပျထားတာမြိုးမလုပျရပါဘူး။ ပါတီခေါငျးဆောငျတှကေို အငျတာဗြူးလုပျမယျဆိုရငျ ဘကျမလိုကျပဲ မေးသငျ့မေးထိုကျတဲ့ မေးခှနျးတှကေို ရဲရဲတငျးတငျး မေးရပါမယျ။ ကွားဖောကျမေးရမှာ အားနာပွီး ပါတီခေါငျးဆောငျပွောသမြှကို ခေါငျးညိတျ နားထောငျနရေငျ အငျတာဗြူးက အငျတာဗြူးနဲ့မတူတော့ပဲ ပါတီကို ကွျောငွာဝငျသလို ဖွဈသှားနိုငျပါတယျ။
• ရှေးကောကျပှဲမှာ ပါဝငျယှဥျပွိုငျမယျ့ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို နိုငျငံရေးနဲ့ မသကျဆိုငျတဲ့ အကွောငျးအရာတှေ မေးမယျဆိုရငျ ကိုယျ့မေးလိုကျတဲ့ မေးခှနျးကွောငျ့ သူတို့ကို ကွျောငွာပေးလိုကျသလို မဖွဈအောငျ သတိထားဖို့လိုပါတယျ။
• ပါတီခေါငျးဆောငျတှေ နဲ့ အငျတာဗြူးလုပျတဲ့အခါမှ သတငျးထောကျက မိမိရဲ့ လယေူလသေိမျး နဲ့ မကျြနှာအမူအရာ ကိုအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယျ။ တခြို့သောပါတီ ခေါငျးဆောငျတှကေို ရိုရိုသသေေ ဆကျဆံပွီး တခြို့ကို မလေးမစား ဆကျဆံတမြိုး၊ မေးခှနျးမေးတဲ့အခါမှာ တခြို့ကို ယဥျယဥျကြေးကြေး မေးပွီး တခြို့ကို ခပျဆတျဆတျမေးတာမြိုးတှေ မလုပျရပါဘူး။
ရှေးကောကျပှဲနဲ့ သကျဆိုငျတဲ့ သတငျးတငျပွခကျြတှအေားလုံးက ဘကျလိုကျမှုကငျးရှငျးတဲ့ သတငျးတငျပွခကျြဖွဈဖို့လိုပါတယျ။
နိုငျငံရေးပါတီတဈခုနဲ့တဈခုအကွားမှာ လူထုထောကျခံမှုအား မညီမြှတာတှရှေိနိုငျပါတယျ။ ဥပမာ အရှယျအစားငယျတဲ့နိုငျငံရေးပါတီတှေ နဲ့ ပူပူနှေး‌နှေးအသဈဖှဲ့စညျးလိုကျတဲ့ ပါတီတှကေ ပါတီကွီးတှလေောကျ လူထုထောကျခံမှုအား ရှိခငျြမှရှိမယျဆိုတာကို သတိမှုရပါတယျ။ အဲဒါကွောငျ့ သတငျးဌာနတှကေ လူထုထောကျခံမှု အားကောငျးတဲ့ ပါတီကွီးတှရေဲ့ သတငျးတှကေိုသာ ဦးစားပေး ဖျောပွတာမြိုးမဖွဈအောငျ အထူးသတိထားရပါတယျ။
အားလုံးကို မြှမြှတတ အခှငျ့အရေးပေးတဲ့အနနေဲ့ နိုငျငံရေးပါတီတှအေားလုံးကို အညီအမြှ အခြိနျပေးဖို့လိုပါတယျ။ (နိုငျငံရေးပါတီ ၉၀ ကြျောဆိုရငျ အခြိနျအညီအမြှပေးဖို့မလှယျတဲ့အတှကျ မြှတအောငျဘယျလိုလုပျမလဲဆိုတာနောကျပိုငျးမှာရှငျးပွထားပါတယျ။)
ရဒေီယို တီဗီ အှနျလိုငျး သတငျးစာ အစရှိတဲ့ ပလကျဖောငျးမြိုးစုံ ပျေါမှာ နိုငျငံရေးပါတီတှကေို အခြိုးညီ အခြိနျပေးရမယျလို့ ဆိုပမေယျ့ ကိနျးဂဏနျးအရ အခြိုးတူ အခြိနျကနျ့သတျပေးရမယျလို့ မဆိုလိုပါဘူး။
တဈရကျထဲမှာပဲ ပါတီတှအေားလုံးကို ညီတူညီမြှ အခြိနျပေးရမယျလို့လညျးမဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပမေဲ့ ရှေးကောကျပှဲမဲဆှယျစညျးရုံးရေးကာလ တလြှောကျ တသီးပုဂ်ဂလအမတျတှအေပါအဝငျ နိုငျငံရေးပါတီတှေ အားလုံးကို တူညီတဲ့ အခှငျ့အရေးပေးရပါမယျ။ တကယျလို့ ပါတီတဈခုခုကို ဒါမှမဟုတျ ပါတီတဈခြို့ကို အခြိနျပိုပေးပွီး တငျဆကျတာတှရှေိခဲ့ရငျ အယျဒီတိုရီးယား လိုအပျခကျြကွောငျ့ တငျပွရပါတယျ ဆိုတဲ့အကွာငျးပွခကျြက မခိုငျလုံပါဘူး။ အယျဒီတိုးရီးယားဆုံးဖွတျခကျြတိုငျးက ဘကျလိုကျခွငျးမရှိပဲ သမာသမတျကကြတြငျပွရမယျဆိုတဲ့ မူနဲ့ အညီ ဆုံးဖွတျရတာဖွဈတဲ့အတှကျ အယျဒီတိုးရီးယား လိုအပျခကျြကွောငျ့ လို့ ပွောလို့မရပါဘူး။
တခါတရံ ပါတီတဈခုက ခေါငျးကွီးသတငျးဖွဈနတေဲ့ အခွအေနမြေိုးနဲ့ ကွုံရတတျပါတယျ။ ခေါငျးကွီးသတငျး ဖွဈတဲ့အတှကျ သတငျးဖျောပွတဲ့အခါမှာ တခွားပါတီတှထေကျ အခြိနျပိုပေး ပွီးဖျောပွရတာမြိုး နဲ့ ကွုံရတတျပါတယျ။ ဒီလိုဖျောပွလိုကျရတဲ့အတှကျ ဘကျလိုကျမှုမရှိအောငျလို့ ကနျြတဲ့ ပါတီတှေ သို့မဟုတျ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှေ ကို သငျ့တျောတဲ့အခြိနျမှာ အလားတူအခြိနျပေးဖျောပွပေးဖို့ လိုပါတယျ။
စောစောကပွောသလို ရှေးကောကျပှဲတငျမယျ့ နိုငျငံရေးပါတီတှေ သိပျမြားနရေငျ တပွေးညီဖျောပွဖို့ လကျတှမှေ့ာ အခကျအခဲရှိနိုငျပါတယျ။
ဒါနဲ့ပတျသကျပွီး ဘီဘီစီက ခမြှတျထားတဲ့ စညျးမြဥျးတဈခု ကို နမူနာ အနနေဲ့ပွောပွခငျြပါတယျ။ အင်ျဂလနျမှာ လူထုထောကျခံမှု အမြားအပွားရရှိထားတဲ့ ပါတီကွီးတှဖွေဈကွတဲ့ ကှနျဆာဗေးတဈ၊ လဘော နဲ့ လဈဗရယျပါတီကွီး သုံးခုကို ဘီဘီစီက ရုပျသံ၊ ရဒေီယို အှနျလိုငျး ပလကျဖောငျးတှမှော တပွေးညီ အခြိနျပေးပါတယျ။ ‌ရှေးကောကျပှဲနဲ့ ပတျသကျတဲ့ တီဗီ၊ ရဒေီယို၊ အှနျလိုငျး အစီအစဥျတှမှော ပါဝငျဖို့ ဒီပါတီသုံးခုက ကိုယျစားလှယျတှကေိုအလြဥျးသငျ့သလို ဖိတျချေါ ပွီး တူညီတဲ့အခှငျ့အရေးပေးပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ လူထုထောကျခံမှုအားနညျးတဲ့ ကနျြတဲ့ ပါတီတှေ နဲ့ ပတျသကျပွီး ဘီဘီစီက ခမြှတျထားတဲ့ လမျးညှနျခကျြက လှတျတျောကိုယျစားလှယျနရောစုစုပေါငျးရဲ့ ခွောကျပုံတဈပုံ မှာ ဝငျရောကျယှဥျပွိုငျမယျ့ နိုငျငံရေးပါတီတှေ ကို ကှနျဆာဗေးတဈ၊ လဘော နဲ့ လဈဗရယျ ပါတီကွီးသုံးခု နညျးတူ အှနျလိုငျးအပါအဝငျ ရုပျသံ၊ ရဒေီယို မှာ တပွေးညီ အခြိနျပေးပွီး တငျဆကျပေးရပါတယျ။
ပါတီကွီးတှနေဲ့ တပွေးညီ အခြိနျပေးရမယျဆိုပမေဲ့ တကယျ့လကျတှမှော ပွောသလောကျမလှယျကူတာကို အယျဒီတာတှေ နားလညျမှာပါ။ ဒါကို ဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ နညျးတနညျးက ရှေးကောကျပှဲကာလအတှငျး နစေ့ဥျ တငျဆကျနတေဲ့ သတငျးမဂ်ဂဇငျးအစီအစဥျတှမှော နိုငျငံရေးပါတီတဈခုခွငျးဆီ ရဲ့ အကွာငျးကို တငျဆကျပေးတဲ့နညျးဖွဈပါတယျ။
ရှေးကောကျပှဲမှာ ပါဝငျယှဥျပွိုငျမယျ့ နိုငျငံရေးပါတီတှနေဲ့ တသီးပုဂ်ဂလကိုယျစားလှယျလောငျးစာရငျးကို အလြဥျးသငျ့ရငျသငျ့သလို ဖျောပွပေးတာကလညျး ပါတီတှအေားလုံးကို တူညီတဲ့ အခှငျ့အရေးပေးတဲ့ သဘောဆောငျပါတယျ။
တသီးပုဂ်ဂလကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေို အားပေးထောကျခံတဲ့မဲဆန်ဒရှငျတှအေမြားအပွားရှိပါတယျ။ သူတို့ကို ပါတီကိုယျစားလှယျလောငျးတှလေိုပဲ တနျးတူအခှငျ့အရေးပေးရပါတယျ။ ရုပျသံ/ရဒေီယို အှနျလိုငျးမှာ အလြဥျးသငျ့သလို တသီးပုဂ်ဂလကိုယျစားလှယျလောငျးတှေ ရဲ့ အကွောငျးကို တငျဆကျပေးဖို့ လိုပါတယျ။ ဒီလိုပွုလုပျတာက တသီးပုဂ်ဂလကိုယျစားလှယျလောငျးတှေ နဲ့ ပရိသတျကို မိတျဆကျပေးတဲ့ သဘောဆောငျသလို သတငျးတိုကျဖကျကကွညျ့ရငျလညျး ကိုယျစားလှယျအားလုံးကို တနျးတူအခှငျ့အရေး ပေးတဲ့သဘောဆောငျပါတယျ။
လူသိထငျရှားတဲ့ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျး ကို အငျတာဗြူးလုပျမယျဆိုရငျ သူပွိုငျမယျ့ မဲဆန်ဒနယျမွေ မှာ ဝငျပွိုငျကွမယျ့ တခွားကိုယျစားလှယျလောငျးတှကေိုပါ အငျတာဗြုးလုပျမှသာ မြှတတဲ့ တငျဆကျမှု ဖွဈနိုငျပါတယျ။
ပညာရှငျ၊ ကြှမျးကငျြသူ၊ သတငျးသမား၊ သုတသေီ၊ ပရဟိတ်တအသငျးကိုယျစားလှယျ
ရှေးကောကျပှဲကာလမှာ ပညာရှငျ၊ ကြှမျးကငျြသူ၊ နိုငျငံရေးအကဲခတျ၊ သတငျးသမား၊ သုတသေီ၊ ပရဟိတ်တအသငျးကိုယျစားလှယျ အစရှိတဲ့ပုဂ်ဂိုလျတှရေဲ့ သဘောထားအမွငျတှေ၊ သုံးသပျခကျြတှေ ကို ရဒေီလို ရုပျသံနဲ့ အှနျလိုငျး အစီအစဥျတှမှော တငျဆကျပွသလရှေိ့ပါတယျ။ အစီအစဥျမှာ ပါဝငျဆှေးနှေးသူတှအေားလုံးကို ကွားနသေူတှလေို့ တထဈခြ ယူဆလို့မရပါဘူး။ ပါတီစှဲ ပုဂ်ဂိုလျစှဲ ရှိသူတှလေညျးပါနိုငျပါတယျ။ တကယျလို့ ဒီလိုလူတှပေါတယျဆိုရငျ သူတို့ရဲ့ပါတီနောကျခံတှကေို ရှငျးရှငျးလငျး ဖျောပွဖို့လိုအပျပါတယျ။ ဥပမာ ပါဝငျဆှေးနှေးတဲ့ ပုဂ်ဂိုလျက နိုငျငံရေးပါတီတဈခုခု နဲ့ ပတျသကျနတေဲ့အဖှဲ့အစညျးရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့ ရပျတညျနတေယျဆိုရငျလညျး သူ့ရဲ့နောကျခံ ကိုဖျောပွဖို့ လိုပါတယျ။
ရုပျသံမှာ ကိုယျစားလှယျလောငျးတှရေဲ့ ပိုစတာတှကေို ပွသတဲ့အခါမှာ ကိုယျစားလှယျလောငျးတဈဦးတညျး ရဲ့ အမညျ/ရုပျပုံကို အသားပေး ဖျောပွတာ မြိုးမလုပျရပါဘူး၊ ဒီလိုလုပျခွငျးအားဖွငျ့အဆိုပါ ကိုယျစားလှယျ လောငျးကိုတခွားကိုယျစားလှယျလောငျးတှထေကျ တဈပနျးသာအောငျကွျောငွာပေးသလို ဖွဈသှားနိုငျ ပါတယျ။
သတငျးထောကျတှအေနနေဲ့ နိုငျငံရေးပါတီရဲ့တံဆိပျ၊ လှတျတျောကိုယျစားလှယျလောငျးရဲ့ ရုပျပုံ ပါတီရဲ့ အရောငျတှကေို ဝတျဆငျခွငျးမပွုရပါဘူး။ ဆိုရှယျမီဒီယာ (သတငျးထောကျတှရေဲ့ ဖစျေ့ဘုတျပရိုဖိုငျမှာလညျး နိုငျငံရေးပါတီပုံ ကိုယျစားလှယျလောငျးရုပျပုံ ၊ တံဆိပျ၊ အ‌ရောငျတှကေို ဝတျဆငျပွီး ပရိုဖိုငျပုံ တငျလို့ မရပါဘူး) ဆိုရှယျမီဒီယာအကောငျ့က ပုဂ်ဂလိကအကောငျ့ လို့ဆိုပမေယျ့ ကိုယျ့ရဲ့ သတငျးဌာန ပုံရိပျကို ထိခိုကျနိုငျသလို သတငျးထောကျရဲ့ နိုငျငံရေးခံယူခကျြက သူတငျပွတဲ့ သတငျးတှအေပျေါ လှမျးမိုးမှုရှိတယျလို့ ပရိသတျက မွငျသှားနိုငျပါတယျ။
တကယျလို့ သတငျးဌာနတဈခုခုက စဈတမျးကောကျယူမယျဆိုရငျ စဈတမျးရဲ့ ရလာဒျက သတငျးတိုကျရဲ့ သဘောထားအမွငျလှမျးမိုးမှုမရှိတဲ့ တိကမြှနျကနျတဲ့ စဈတမျးဖွဈဖို့လိုပါတယျ။ တိကမြှနျကနျမှုရှိမရှိ အကဲဖွတျနိုငျအောငျ စဈတမျးကောကျယူပုံနညျးစံနဈ၊ ဒတော တှကေို သတငျးတိုကျက အခြိနျမရှေး ခပြွဖို့ အဆငျသငျ့ပွငျဆငျ ထားဖို့လိုပါတယျ။
စဈတမျးရဲ့ရလာဒျကို ဖျောပွတဲ့အခါမှာ စကားလုံးအသုံးအနှုနျးကို သတိထားရပါတယျ။ ဥပမာ စဈတမျးက “ အကွံပွုသညျ” “အဆိုပွုသညျ””ညှနျပွသညျ” လို့သာသုံးရပါတယျ။ “သကျသပွေသညျ” “ထငျထငျရှားရှားဖျောပွသညျ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုနျးမြိုးကိုရှောငျရပါတယျ။
သဘောထားစဈတမျးရလာဒျ ကို ဘယျအခြိနျမှာ ထုတျပွနျမလဲဆိုတာအရေးကွီးပါတယျ။ မဲရုံတှပေိတျပွီး မှသာ သဘောထားစဈတမျးရဲ့ရလာဒျကို တငျပွခှငျ့ရှိပါတယျ။ မဲရုံတှမေပိတျခငျ မဲဆန်ဒရှငျတှကေ ဘယျပါတီကိုမဲထညျ့ခဲ့တယျဆိုတာကိုဖျောပွခှငျ့မရှိပါဘူး။ ဗွိတိနျမှာဒီစညျးမြဥျးကို ခြိုးဖောကျရငျ ရာဇဝတျပွဈမှု မွောကျပါတယျ။
ရဒေီယို ရုပျသံ ဝကျဆိုကျပျေါမှာ ရှေးကောကျပှဲနဲ့ပတျသကျတဲ့ ပရိသတျရဲ့ သဘောထားအမွငျတှေ တငျပွပေးဖို့ လိုအပျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ တငျပွတဲ့အခါမှာ မြှတမှုရှိဖို့လိုပါတယျ။ နိုငျငံရေးပါတီတှထေဲက ပါတီတဈခုခုကိုပဲ လူထုက အငျတိုကျအားတိုကျထောကျခံနတေဲ့ ပုံစံမဖွဈအောငျဂရုစိုကျဖို့လိုပါတယျ။
ဒီမိုကရစေီစံနဈအောကျမှာ သတငျးသမားတှကေ မိမိနှဈသကျရာ နိုငျငံရေးပါတီရဲ့ အဖှဲ့ဝငျဖွဈခှငျ့ရှိသလို မဲပေးခှငျ့လညျးရှိပါတယျ။ သတငျးသမားတှကေ ရှေးကောကျပှဲကာလမှာ မိမိရဲ့ ပါတီအတှကျ မဲဆှယျစညျးရုံးတာ၊ ပါတီအောငျနိုငျရေးအတှကျ နိငျငံရေးလှုပျရှားမှုတှကေို လုပျခှငျ့မရှိပါဘူး။
‌ရှေးကောကျပှဲကာလမှာ မမြှျောလငျ့ပဲ အကွမျးဖကျမှုဖွဈနိုငျပါတယျ။ လူစုလူဝေးနရောတှမှော သတငျးယူတဲ့အခါ အမြိုးသမီးသတငျးထောကျတှကေအမြိုးသားတှထေကျပိုပွီးအန်တရာယျမြားပါတယျ။ လူစုလူဝေးနရောတှမှာ သတငျးသှားမယူခငျ တဖကျနဲ့တဖကျ အခငျြးမြားတာပဲဖွဈဖွဈ အကွမျးဖကျတိုကျခိုကျတာပဲဖွဈဖွဈ ဖွဈလာခဲ့ရငျ ဘယျလိုကာကှယျမလဲဆိုတာကို အယျဒီတာနဲ့ ကွိုတငျဆှေးနှေးဖို့လိုပါတယျ။ ပဋိပက်ခဖွဈနိုငျတဲ့နရောတှမှော မကွာခဏသတငျးယူရတဲ့ သတငျးထောကျတှကေို ရှေးဦးသူနာပွုသငျတနျးအပါအဝငျ လုံခွုံရေးနဲ့ပတျသကျတဲ့ သငျတနျးတှစေီစဥျပေးသငျ့ပါတယျ။ လူစုလူဝေးနရောတှမှော သတငျးသှားယူနဲ့အခါ တောကျပတဲ့ အရောငျအင်ျကြီမဝတျဖို့၊ ကငျမရာသမားက ကငျမရာရိုကျနရေငျ နောကျတယောကျက ကငျမရာသမားနောကျကနေ ဘေးပတျဝနျးကငျြကိုအကဲခတျဖို့၊ ပွေးလို့လှယျတဲ့ ဖိနပျစီးဖို့၊ အဖှဲ့နဲ့ သှားတယျဆိုရငျလညျး အခငျြးခငျြးဆကျသှယျနိုငျတဲ့နညျးတှကေို ညှိနှိုငျးထားဖို့ အစရှိတဲ့ ကွိုတငျပွငျဆငျမှုတှကေို သတငျးတိုကျတှကေ ပွုလုပျပေးခွငျးအားဖွငျ့ သတငျးထောကျတှကေို အကာအကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
အောငျတိုဘာ ၁ရကျ ၂၀၂၀
ရွေးကောက်ပွဲကာလ သတင်းယူရာတွင် လိုက်နာရမည့် ကျင့်ဝတ်များ
( နိုဝင်ဘာ ၈ရက်နေ့မှာကျင်းပတော့မယ့် ရွေးကောက်ပွဲအတွက် သတင်းဌာနအသီးသီးဟာ ပြင်ဆင်မှုမျိုးစုံလုပ်နေကြပြီဖြစ်တာမို့ အယ်ဒီတာတွေ၊သတင်းထောက်တွေအတွက် သိသင့်သိထိုက်တာတွေကို ဘီဘီစီမြန်မာပိုင်းရဲ့ အငြိမ်းစားဌာနမှူးဖြစ်တဲ့ ဒေါ်တင်ထားဆွေက သူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို ဝေမျှထားတာဖြစ်ပါတယ်။ )
အယ်ဒီတာ ( VOM)
ရွေးကောက်ပွဲကာလ သတင်းထောက်တွေလိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေကို သက်ဆိုင်ရာ သတင်းဌာနတွေက ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်မီမှာ ထုတ်ပြန်လေ့ရှိပါတယ်။ ဥပမာ ဘီဘီစီက အယ်ဒီတိုးရီးယား ဂိုက်လိုင်းမှာ ရွေးကောက်ပွဲ သတင်းယူတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆောင်ရန် ရှောင်ရန်တွေ ဖော်ပြထားပေမယ့်လည်း ရွေးကောက်ပွဲနီးလာတဲ့အခါမှာ သတင်းထောက်တွေလိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်စည်းမျဉ်းအသေးစိတ်ကို ထုတ်ပြန်ပေးပါတယ်။ ‌
ရွေးကောက်ပွဲလုပ်တဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံရေးအခြေအနေက အရင်လိုမဟုတ်ပဲ ပြောင်းသွားနိုင်တာကြောင့် သတင်းထောက်တွေ လိုက်နာရမယ့် ဂိုက်လိုင်းတွေ ကို ပြန်လည်သုံးသပ်ပြီး လိုအပ်တာတွေကို ဖြည့်စွက်ဖော်ပြပေးပါတယ်။
သတင်းတိုက်အသီးသီးက ရွေးကောက်ပွဲကာလ သတင်းယူတဲ့အခါမှာ လိုက်နာရမယ့် ကျင့်ဝတ်တွေ ထုတ်ပြန်ထားလေ့ရှိတာမို့ ကျွန်မအခု စုစည်းဖော်ပြထားတဲ့ ကျင့်ဝတ်တွေက အယ်ဒီတာတွေနဲ့ သတင်းထောက်တွေ ယေဘုယျ လိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
မီဒီယာတွေ ဘက်လိုက်မှု ရှိမရှိ အစမ်းသပ် အခံရဆုံးအချိန်က ရွေးကောက်ပွဲကာလလို့ပြောရင် မှားမယ်မထင်ပါဘူး။ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းတွေတင်ပြတဲ့ အခါမှာ သတင်းထောက်တွေ အနေ နဲ့ မမှိတ်မသုံလိုက်နာရမယ့် အချက်နှစ်ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒါကတော့ နိုင်ငံရေး သတင်းတွေကို တင်ပြတဲ့အခါမှာ တိကျမှန်ကန်မှု နဲ့ ဘက်လိုက်မှုမရှိပဲ သမာသမတ်ရှိရှိ တင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
သတင်းဦးဖို့ထက် တိကျမှန်ကန်မှုရှိဖို့က ပို အရေးကြီးပါတယ်။
တိကျမှန်ကန်မှု ဆိုတာ အချက်အလက်တွေမှန်ကန်တာတစ်ခုတည်းကိုမဆိုလိုပါဘူး။ အချက်အလက်မှန်ဖို့ လိုသလို သတင်းနဲ့ ဆက်စပ်နေတဲ့ ဆီလျော်တဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကိုပါထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်။ တိကျမှန်ကန်တဲ့ သတင်းဟုတ်မဟုတ်ကို စိစစ်တဲ့အခါမှာ အောက်ဖော်ပြပါအချက်တွေကို ထည့်သွင်း စဉ်းစား ဖို့လိုပါတယ်။
 ရရှိတဲ့သတင်းအချက်အလက်က သတင်းဖြစ်တဲ့နေရာမှာ ရောက်နေတဲ့ သတင်းထောက် သို့မဟုတ် မျက်မြင်သက်သေဆီကသတင်းလား ?
 သတင်းအရင်းအမြစ် တစ်ခုတည်းကို ကိုးကားဖော်ပြတာမျိုးကို အတတ်နိုင်ဆုံးရှောင်ရန် (တကယ်လို့ သတင်းအရင်းအမြစ်တစ်ခုတည်းကို ကိုကားမယ်ဆိုရင် ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ သတင်းအရင်းဖြစ်ဖို့လိုသလို သတင်းအရင်းအမြစ်ကို လိုအပ်ရင် အမည်နဲ့တကွ ဖော်ပြနိုင်ဖို့လိုပါတယ်)
 ရရှိတဲ့အချက်အလက်တွေနဲ့ ကိန်းဂဏန်း စာရင်းဇယားတွေကိုစိစစ်ပါမယ်။ စိစစ်တဲ့အခါမှာ သတိပြုရမယ့်အချက်တွေပါရင် မှတ်သားထားဖို့လိုပါတယ်။
 စာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေ နဲ့ ဒစ်ဂျစ်တယ် အထောက်အထားတွေ ရရှိရင် ခိုင်လုံမှုရှိမရှိစိစစ်ရန်
 ပါဝင်ပတ်သက်သူတွေရဲ့ပြောဆိုစွပ်စွဲချက်တွေက ခိုင်မာမှုရှိမရှိစစ်ဆေးရန် တို့ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ အင်တာဗျူးတွေက မဲဆန္ဒရှင်တွေ နဲ့ ပါတီတွေကို မိတ်ဆက်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ လိုအပ်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
• နိင်ငံရေးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အင်တာဗျူးတွေလုပ်ဖို့ နိုင်ငံရေးပါတီ သို့မဟုတ် ရွေးကောက်ပွဲဝင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို အင်တာဗျူးတောင်းတဲ့ အခါမှာ ကိုယ်တောင်းတဲ့အင်တာဗျူးကို ဘယ်အစီအစဉ်ကနေ တင်ဆက်မယ်ဆိုတာရယ်၊ ဘယ်လိုအကြောင်းအရာနဲ့ ဆက်စပ်ပြီး တင်ပြမယ်ဆိုတာရယ်ကို အင်တာဗျူးပေးတဲ့ သူသိအောင်လို့ ရှင်းပြဖို့တာဝန်ရှိပါတယ်။ မပြောပဲလွှင့်လိုက်ပြီးမှ ကန့်ကွက်တာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့ ကြိုတင်အသိပေးဖို့လိုပါတယ်။
• အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါမှာ မေးသင့်မေးထိုက်တဲ့မေးခွန်းတွေကို မေးရပါမယ်။ မေးသင့်တဲ့မေးခွန်းတွေကို မမေးပဲ ချန်လှပ်ထားတာမျိုးမလုပ်ရပါဘူး။ ပါတီခေါင်းဆောင်တွေကို အင်တာဗျူးလုပ်မယ်ဆိုရင် ဘက်မလိုက်ပဲ မေးသင့်မေးထိုက်တဲ့ မေးခွန်းတွေကို ရဲရဲတင်းတင်း မေးရပါမယ်။ ကြားဖောက်မေးရမှာ အားနာပြီး ပါတီခေါင်းဆောင်ပြောသမျှကို ခေါင်းညိတ် နားထောင်နေရင် အင်တာဗျူးက အင်တာဗျူးနဲ့မတူတော့ပဲ ပါတီကို ကြော်ငြာဝင်သလို ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။
• ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို နိုင်ငံရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာတွေ မေးမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်မေးလိုက်တဲ့ မေးခွန်းကြောင့် သူတို့ကို ကြော်ငြာပေးလိုက်သလို မဖြစ်အောင် သတိထားဖို့လိုပါတယ်။
• ပါတီခေါင်းဆောင်တွေ နဲ့ အင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါမှ သတင်းထောက်က မိမိရဲ့ လေယူလေသိမ်း နဲ့ မျက်နှာအမူအရာ ကိုအထူးသတိထားဖို့လိုပါတယ်။ တချို့သောပါတီ ခေါင်းဆောင်တွေကို ရိုရိုသေသေ ဆက်ဆံပြီး တချို့ကို မလေးမစား ဆက်ဆံတမျိုး၊ မေးခွန်းမေးတဲ့အခါမှာ တချို့ကို ယဉ်ယဉ်ကျေးကျေး မေးပြီး တချို့ကို ခပ်ဆတ်ဆတ်မေးတာမျိုးတွေ မလုပ်ရပါဘူး။
ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ သက်ဆိုင်တဲ့ သတင်းတင်ပြချက်တွေအားလုံးက ဘက်လိုက်မှုကင်းရှင်းတဲ့ သတင်းတင်ပြချက်ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။
နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကြားမှာ လူထုထောက်ခံမှုအား မညီမျှတာတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ အရွယ်အစားငယ်တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေ နဲ့ ပူပူနွေး‌နွေးအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ ပါတီတွေက ပါတီကြီးတွေလောက် လူထုထောက်ခံမှုအား ရှိချင်မှရှိမယ်ဆိုတာကို သတိမှုရပါတယ်။ အဲဒါကြောင့် သတင်းဌာနတွေက လူထုထောက်ခံမှု အားကောင်းတဲ့ ပါတီကြီးတွေရဲ့ သတင်းတွေကိုသာ ဦးစားပေး ဖော်ပြတာမျိုးမဖြစ်အောင် အထူးသတိထားရပါတယ်။
အားလုံးကို မျှမျှတတ အခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီတွေအားလုံးကို အညီအမျှ အချိန်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ (နိုင်ငံရေးပါတီ ၉၀ ကျော်ဆိုရင် အချိန်အညီအမျှပေးဖို့မလွယ်တဲ့အတွက် မျှတအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာနောက်ပိုင်းမှာရှင်းပြထားပါတယ်။)
ရေဒီယို တီဗီ အွန်လိုင်း သတင်းစာ အစရှိတဲ့ ပလက်ဖောင်းမျိုးစုံ ပေါ်မှာ နိုင်ငံရေးပါတီတွေကို အချိုးညီ အချိန်ပေးရမယ်လို့ ဆိုပေမယ့် ကိန်းဂဏန်းအရ အချိုးတူ အချိန်ကန့်သတ်ပေးရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။
တစ်ရက်ထဲမှာပဲ ပါတီတွေအားလုံးကို ညီတူညီမျှ အချိန်ပေးရမယ်လို့လည်းမဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကာလ တလျှောက် တသီးပုဂ္ဂလအမတ်တွေအပါအဝင် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အားလုံးကို တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးပေးရပါမယ်။ တကယ်လို့ ပါတီတစ်ခုခုကို ဒါမှမဟုတ် ပါတီတစ်ချို့ကို အချိန်ပိုပေးပြီး တင်ဆက်တာတွေရှိခဲ့ရင် အယ်ဒီတိုရီးယား လိုအပ်ချက်ကြောင့် တင်ပြရပါတယ် ဆိုတဲ့အကြာင်းပြချက်က မခိုင်လုံပါဘူး။ အယ်ဒီတိုးရီးယားဆုံးဖြတ်ချက်တိုင်းက ဘက်လိုက်ခြင်းမရှိပဲ သမာသမတ်ကျကျတင်ပြရမယ်ဆိုတဲ့ မူနဲ့ အညီ ဆုံးဖြတ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် အယ်ဒီတိုးရီးယား လိုအပ်ချက်ကြောင့် လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။
တခါတရံ ပါတီတစ်ခုက ခေါင်းကြီးသတင်းဖြစ်နေတဲ့ အခြေအနေမျိုးနဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ခေါင်းကြီးသတင်း ဖြစ်တဲ့အတွက် သတင်းဖော်ပြတဲ့အခါမှာ တခြားပါတီတွေထက် အချိန်ပိုပေး ပြီးဖော်ပြရတာမျိုး နဲ့ ကြုံရတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖော်ပြလိုက်ရတဲ့အတွက် ဘက်လိုက်မှုမရှိအောင်လို့ ကျန်တဲ့ ပါတီတွေ သို့မဟုတ် ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ကို သင့်တော်တဲ့အချိန်မှာ အလားတူအချိန်ပေးဖော်ပြပေးဖို့ လိုပါတယ်။
စောစောကပြောသလို ရွေးကောက်ပွဲတင်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ သိပ်များနေရင် တပြေးညီဖော်ပြဖို့ လက်တွေ့မှာ အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘီဘီစီက ချမှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတစ်ခု ကို နမူနာ အနေနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်။ အင်္ဂလန်မှာ လူထုထောက်ခံမှု အများအပြားရရှိထားတဲ့ ပါတီကြီးတွေဖြစ်ကြတဲ့ ကွန်ဆာဗေးတစ်၊ လေဘာ နဲ့ လစ်ဗရယ်ပါတီကြီး သုံးခုကို ဘီဘီစီက ရုပ်သံ၊ ရေဒီယို အွန်လိုင်း ပလက်ဖောင်းတွေမှာ တပြေးညီ အချိန်ပေးပါတယ်။ ‌ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ တီဗီ၊ ရေဒီယို၊ အွန်လိုင်း အစီအစဉ်တွေမှာ ပါဝင်ဖို့ ဒီပါတီသုံးခုက ကိုယ်စားလှယ်တွေကိုအလျဉ်းသင့်သလို ဖိတ်ခေါ် ပြီး တူညီတဲ့အခွင့်အရေးပေးပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ လူထုထောက်ခံမှုအားနည်းတဲ့ ကျန်တဲ့ ပါတီတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘီဘီစီက ချမှတ်ထားတဲ့ လမ်းညွှန်ချက်က လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်နေရာစုစုပေါင်းရဲ့ ခြောက်ပုံတစ်ပုံ မှာ ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ ကို ကွန်ဆာဗေးတစ်၊ လေဘာ နဲ့ လစ်ဗရယ် ပါတီကြီးသုံးခု နည်းတူ အွန်လိုင်းအပါအဝင် ရုပ်သံ၊ ရေဒီယို မှာ တပြေးညီ အချိန်ပေးပြီး တင်ဆက်ပေးရပါတယ်။
ပါတီကြီးတွေနဲ့ တပြေးညီ အချိန်ပေးရမယ်ဆိုပေမဲ့ တကယ့်လက်တွေမှာ ပြောသလောက်မလွယ်ကူတာကို အယ်ဒီတာတွေ နားလည်မှာပါ။ ဒါကို ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ နည်းတနည်းက ရွေးကောက်ပွဲကာလအတွင်း နေ့စဉ် တင်ဆက်နေတဲ့ သတင်းမဂ္ဂဇင်းအစီအစဉ်တွေမှာ နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခြင်းဆီ ရဲ့ အကြာင်းကို တင်ဆက်ပေးတဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်။
ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် နိုင်ငံရေးပါတီတွေနဲ့ တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းစာရင်းကို အလျဉ်းသင့်ရင်သင့်သလို ဖော်ပြပေးတာကလည်း ပါတီတွေအားလုံးကို တူညီတဲ့ အခွင့်အရေးပေးတဲ့ သဘောဆောင်ပါတယ်။
တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကို အားပေးထောက်ခံတဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေအများအပြားရှိပါတယ်။ သူတို့ကို ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေလိုပဲ တန်းတူအခွင့်အရေးပေးရပါတယ်။ ရုပ်သံ/ရေဒီယို အွန်လိုင်းမှာ အလျဉ်းသင့်သလို တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ ရဲ့ အကြောင်းကို တင်ဆက်ပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီလိုပြုလုပ်တာက တသီးပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေ နဲ့ ပရိသတ်ကို မိတ်ဆက်ပေးတဲ့ သဘောဆောင်သလို သတင်းတိုက်ဖက်ကကြည့်ရင်လည်း ကိုယ်စားလှယ်အားလုံးကို တန်းတူအခွင့်အရေး ပေးတဲ့သဘောဆောင်ပါတယ်။
လူသိထင်ရှားတဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်း ကို အင်တာဗျူးလုပ်မယ်ဆိုရင် သူပြိုင်မယ့် မဲဆန္ဒနယ်မြေ မှာ ဝင်ပြိုင်ကြမယ့် တခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုပါ အင်တာဗျုးလုပ်မှသာ မျှတတဲ့ တင်ဆက်မှု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ပညာရှင်၊ ကျွမ်းကျင်သူ၊ သတင်းသမား၊ သုတေသီ၊ ပရဟိတ္တအသင်းကိုယ်စားလှယ်
ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ ပညာရှင်၊ ကျွမ်းကျင်သူ၊ နိုင်ငံရေးအကဲခတ်၊ သတင်းသမား၊ သုတေသီ၊ ပရဟိတ္တအသင်းကိုယ်စားလှယ် အစရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေ၊ သုံးသပ်ချက်တွေ ကို ရေဒီလို ရုပ်သံနဲ့ အွန်လိုင်း အစီအစဉ်တွေမှာ တင်ဆက်ပြသလေ့ရှိပါတယ်။ အစီအစဉ်မှာ ပါဝင်ဆွေးနွေးသူတွေအားလုံးကို ကြားနေသူတွေလို့ တထစ်ချ ယူဆလို့မရပါဘူး။ ပါတီစွဲ ပုဂ္ဂိုလ်စွဲ ရှိသူတွေလည်းပါနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒီလိုလူတွေပါတယ်ဆိုရင် သူတို့ရဲ့ပါတီနောက်ခံတွေကို ရှင်းရှင်းလင်း ဖော်ပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာ ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုခု နဲ့ ပတ်သက်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ ကူညီပံ့ပိုးမှုနဲ့ ရပ်တည်နေတယ်ဆိုရင်လည်း သူ့ရဲ့နောက်ခံ ကိုဖော်ပြဖို့ လိုပါတယ်။
ရုပ်သံမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရဲ့ ပိုစတာတွေကို ပြသတဲ့အခါမှာ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦးတည်း ရဲ့ အမည်/ရုပ်ပုံကို အသားပေး ဖော်ပြတာ မျိုးမလုပ်ရပါဘူး၊ ဒီလိုလုပ်ခြင်းအားဖြင့်အဆိုပါ ကိုယ်စားလှယ် လောင်းကိုတခြားကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေထက် တစ်ပန်းသာအောင်ကြော်ငြာပေးသလို ဖြစ်သွားနိုင် ပါတယ်။
သတင်းထောက်တွေအနေနဲ့ နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့တံဆိပ်၊ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရဲ့ ရုပ်ပုံ ပါတီရဲ့ အရောင်တွေကို ဝတ်ဆင်ခြင်းမပြုရပါဘူး။ ဆိုရှယ်မီဒီယာ (သတင်းထောက်တွေရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်ပရိုဖိုင်မှာလည်း နိုင်ငံရေးပါတီပုံ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းရုပ်ပုံ ၊ တံဆိပ်၊ အ‌ရောင်တွေကို ဝတ်ဆင်ပြီး ပရိုဖိုင်ပုံ တင်လို့ မရပါဘူး) ဆိုရှယ်မီဒီယာအကောင့်က ပုဂ္ဂလိကအကောင့် လို့ဆိုပေမယ့် ကိုယ့်ရဲ့ သတင်းဌာန ပုံရိပ်ကို ထိခိုက်နိုင်သလို သတင်းထောက်ရဲ့ နိုင်ငံရေးခံယူချက်က သူတင်ပြတဲ့ သတင်းတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်လို့ ပရိသတ်က မြင်သွားနိုင်ပါတယ်။
တကယ်လို့ သတင်းဌာနတစ်ခုခုက စစ်တမ်းကောက်ယူမယ်ဆိုရင် စစ်တမ်းရဲ့ ရလာဒ်က သတင်းတိုက်ရဲ့ သဘောထားအမြင်လွှမ်းမိုးမှုမရှိတဲ့ တိကျမှန်ကန်တဲ့ စစ်တမ်းဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်။ တိကျမှန်ကန်မှုရှိမရှိ အကဲဖြတ်နိုင်အောင် စစ်တမ်းကောက်ယူပုံနည်းစံနစ်၊ ဒေတာ တွေကို သတင်းတိုက်က အချိန်မရွေး ချပြဖို့ အဆင်သင့်ပြင်ဆင် ထားဖို့လိုပါတယ်။
စစ်တမ်းရဲ့ရလာဒ်ကို ဖော်ပြတဲ့အခါမှာ စကားလုံးအသုံးအနှုန်းကို သတိထားရပါတယ်။ ဥပမာ စစ်တမ်းက “ အကြံပြုသည်” “အဆိုပြုသည်””ညွှန်ပြသည်” လို့သာသုံးရပါတယ်။ “သက်သေပြသည်” “ထင်ထင်ရှားရှားဖော်ပြသည်” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းမျိုးကိုရှောင်ရပါတယ်။
သဘောထားစစ်တမ်းရလာဒ် ကို ဘယ်အချိန်မှာ ထုတ်ပြန်မလဲဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်။ မဲရုံတွေပိတ်ပြီး မှသာ သဘောထားစစ်တမ်းရဲ့ရလာဒ်ကို တင်ပြခွင့်ရှိပါတယ်။ မဲရုံတွေမပိတ်ခင် မဲဆန္ဒရှင်တွေက ဘယ်ပါတီကိုမဲထည့်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြခွင့်မရှိပါဘူး။ ဗြိတိန်မှာဒီစည်းမျဉ်းကို ချိုးဖောက်ရင် ရာဇဝတ်ပြစ်မှု မြောက်ပါတယ်။
ရေဒီယို ရုပ်သံ ဝက်ဆိုက်ပေါ်မှာ ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ ပရိသတ်ရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေ တင်ပြပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ တင်ပြတဲ့အခါမှာ မျှတမှုရှိဖို့လိုပါတယ်။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေထဲက ပါတီတစ်ခုခုကိုပဲ လူထုက အင်တိုက်အားတိုက်ထောက်ခံနေတဲ့ ပုံစံမဖြစ်အောင်ဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။
ဒီမိုကရေစီစံနစ်အောက်မှာ သတင်းသမားတွေက မိမိနှစ်သက်ရာ နိုင်ငံရေးပါတီရဲ့ အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခွင့်ရှိသလို မဲပေးခွင့်လည်းရှိပါတယ်။ သတင်းသမားတွေက ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ မိမိရဲ့ ပါတီအတွက် မဲဆွယ်စည်းရုံးတာ၊ ပါတီအောင်နိုင်ရေးအတွက် နိင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကို လုပ်ခွင့်မရှိပါဘူး။
‌ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ မမျှော်လင့်ပဲ အကြမ်းဖက်မှုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ လူစုလူဝေးနေရာတွေမှာ သတင်းယူတဲ့အခါ အမျိုးသမီးသတင်းထောက်တွေကအမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးအန္တရာယ်များပါတယ်။ လူစုလူဝေးနေရာတွမှာ သတင်းသွားမယူခင် တဖက်နဲ့တဖက် အချင်းများတာပဲဖြစ်ဖြစ် အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်လာခဲ့ရင် ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဆိုတာကို အယ်ဒီတာနဲ့ ကြိုတင်ဆွေးနွေးဖို့လိုပါတယ်။ ပဋိပက္ခဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာတွေမှာ မကြာခဏသတင်းယူရတဲ့ သတင်းထောက်တွေကို ရှေးဦးသူနာပြုသင်တန်းအပါအဝင် လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ သင်တန်းတွေစီစဉ်ပေးသင့်ပါတယ်။ လူစုလူဝေးနေရာတွေမှာ သတင်းသွားယူနဲ့အခါ တောက်ပတဲ့ အရောင်အင်္ကျီမဝတ်ဖို့၊ ကင်မရာသမားက ကင်မရာရိုက်နေရင် နောက်တယောက်က ကင်မရာသမားနောက်ကနေ ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကိုအကဲခတ်ဖို့၊ ပြေးလို့လွယ်တဲ့ ဖိနပ်စီးဖို့၊ အဖွဲ့နဲ့ သွားတယ်ဆိုရင်လည်း အချင်းချင်းဆက်သွယ်နိုင်တဲ့နည်းတွေကို ညှိနှိုင်းထားဖို့ အစရှိတဲ့ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို သတင်းတိုက်တွေက ပြုလုပ်ပေးခြင်းအားဖြင့် သတင်းထောက်တွေကို အကာအကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
အောင်တိုဘာ ၁ရက် ၂၀၂၀
Article, Election, ဆောငျးပါး